Dhangiiwwan hundaa kan akkaataalee tiin hin hojjetamne ejjatoo muraasaan gaabbuu ni dandeessa.
Galmee barreessaa LibreOffice keessaa takkaan dhanguu hunda haquu
Barruu hunda filachuuf Ctrl+A dhiibi.
Dhangii - Dhangii Durtii fili.
Wardii Calc LibreOffice keessaa takkaan dhanguu hunda haquu
Wardiilee hunda filachuuf, furtuu Shift utuu dhiibaa jirtuu caancala wardii isa jalqabaa fi sanaan booda isa dhumaa cuqaasi.
Dhiheessa LibreOffice keessaa takkaan dhanguu hunda haquu
Toorii mul'annoo banuuf, caancala Outline cuqaasi.
Title is: Takkaan Dhanguu galmee gaabbuu